ဒိုင်ယာနာ Alexandrova - ကခုန်အကြီးမြတ်ဆုံးစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါသည် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ငါသူမ၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်သူသည်လူငယ်တစ်ဦးနှင့်ရည်မှန်းချက်ကြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူဤနေရာတွင်ယနေ့ဖြစ်၏။ သူမသည်ဓာတုနည်းပညာနှင့်သတ္တုဗေဒတက္ကသိုလ်ကနေဂုဏ်ထူး, စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေး၏ဘွဲ့နှင့် Business Management ကိုတစ်ဦးမာစတာနှင့်အတူဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ရန်နှင့်သူမ၏တိုင်းတစ်ခုတည်းယခုအချိန်တွင်ပျော်ရွှင်ခံစားရစေသည်တစ်လမ်းအတွက်သူမ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်သူမ၏နှလုံးနားထောင်ရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူပြည့်စုံအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူတစ်ဦးကမိန်းမငယ်။ သူမ၏အမည်အားဒိုင်ယာနာ Alexandrova ဖြစ်ပါတယ်။
Plamena Petkova အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag များအတွက်:
သင်ပြုသောအရာတို့ကိုအချို့အနက်အားကစား, ကခုန်ခြင်းနှင့်သေနတ်များနှင့်အတူရိုက်ကူးကြသည်။ ပထမဦးဆုံးသင်ကအကြောင်းနှင့်မည်သို့ကအားလုံးကိုစတင်ခဲ့ဘူးဆွဲဆောင်ဘာပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်လာခဲ့သည်ခဲ့သည့်တဦးတည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ?
ကခုန်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစိတ်အားထက်သန်သည်။ ငါနေဆဲကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောအခါဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါကခုန်ချင်ရှိသမျှကိုငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ကခုန်စတူဒီယိုသို့သှားကွ၏ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တဲ့သူတစ်ဦးတည်းငါ့ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုမှာ 15 နှစ်ကြာငါနေဆဲ haven`t အဲဒီမှာအထဲကပေါ်လာပြီငါအထဲမှာအများကြီးပိုအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကခုန်တတ်၏သောပျော်ရွှင်မှုကို, ယုံကြည်မှု, ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြရန်သင့်အားပေးတော်မူသောလွတ်လပ်ခွင့်, ဒီကခုန်၏မှော်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခေတ်ပြိုင်ကခုန်ပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်သည်အထိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်အခြားဘယ်အရာကိုစတိုင်များကိုထည့်သွင်းလို့, jazz, လက်တင်ခုန်, ဇာတ်ကောင်ကခုန်တောင်မှနည်းနည်း breakdance ရှောက်သွား, ဘဲလေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပါပြီ။ အဘယ်အရာကိုသင်တို့အဘို့အကအခုန်ယေဘုယျ၌တည်ရှိ၏နှင့်ကခုန်စတိုင်များ၏မြေတပြင်လုံး palette သင်သည်အဘယ်အရာကိုပေးခဲ့တာလဲ
ရှိသမျှတို့ကိုငါကခုန်စတိုင်များနှင့်သင်လှုပ်ရှားမှုတလျှောက်လုံးဖျောပွနိုငျသောဖြစ်နိုင်သောလမ်းကိုလေးစားသည်စတိုင်အထူးသဖြင့်တစ်ဦး dancer အဘို့, အဆင်းလှခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သည် - တစ်ဦး dancer, အရာအားလုံးကြိုးစားသင့်သူ / သူမ၏ကခုန်ယဉ်ကျေးမှုကြွယ်ဝစေနိုင်မည်ဖြစ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အများဆုံးဝတ်စုံတွေ့ရှိရန် သူသူမ။ ကခုန်ဝိညာဉ်တော်သည်တစ်ပြည်နယ်နှင့်အပြုံးအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုမူလတန်းစကားရပ်, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သို့မဟုတ်အခြားစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏ရုံအမူအရာအဖြစ်ကို embedded ဖြစ်ပါတယ် - အဘယျသို့အကြှနျုပျအဘို့အကအခုန်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအဖြေနှင့်အတူမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကိုအအတွင်းတွင်မဟုတ်ဘဲလေးဥပမာများအတွက်ပါးရည်နပ်ရည်တို့နှင့်ကြီးသော virtuoso အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့မူလတန်းဖြစ်တည်မှုအကြောင်းပြောနေတာနေပါတယ်။ ကခုန်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖုန်ထူခုန်ခန်းမများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ပြောင်းလဲထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါခန်းမနှင့်အော်ပရာမဝင်ခင်ကကိုယျ့ကိုယျကိုမှထွက်လာသည်ဟုစဉ်းစားပါ။ ကခုန်သိပ်ပြီးများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တူဖြစ်လာသည်၎င်း၏ကုထုံးအင်္ဂါရပ်နှင့်တကွ, ကခုန်ကြှနျုပျတို့အားလုံးသိ, ကုသနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကခုန်အဘယ်ကြောင့် That`s ။ အကအခုန်တစ်ခုအကြွင်းမဲ့အာဏာစွမ်းအင်အဆင့်တွင်ကိုယျ့ကိုယျကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်သားသမီးများနှင့်အတူဆက်သွယ်တစ်ခါတစ်ရံအရမ်းပင်ပန်းတယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းကြိုးဖြစ်ပါသည်, သင်တက်ကြွ, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အသိတွေအများကြီးအများကြီးတတ်၏။ ၎င်းသည်သရုပ်ြပများနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကုထုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများသည်သင်ရယ်မောစေရန်, သင်ခံစားမိစေရန်, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသငျသညျမထိဖို့မယ့်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း, ဒါကြောင့်နုံများနှင့်သန့်စင်သောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုသင်နှင့်သင်၏အလုပ်ဆီသို့ဦးတည်လစျြလြူရှုမတည်မနေနိုငျပါ။ ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်အဖြစ်ကိုလည်းဒီအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းစီမံခန့်ခွဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှင်, ငါတို့သည်ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့လိမ့်မည်, ကလေးများသူတို့စိတျထဲမှာရှိအရာပေါ်အလွယ်တကူအရှုံးမပေးပါဘူးသူတို့လုံးဝကိုယျကြိုးစှနျ့နှလုံးထဲကသူတို့ကခငျြတစ်ခုခု, လိုခငျြအခါတိုင်း။
သင်ဆုတံဆိပ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ, တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်သဘောသဘာဝနှင့်အတူမြောက်မြားစွာကခုန်ပြိုင်ပွဲနှင့်ပွဲတော်များပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ ...
ဟုတ်ကဲ့, အသီးသီးငါမအမြဲ၏သင်တန်း, ရှေးဦးစွာသောနေရာများနှင့်ဆုတံဆိပ်၌ကြီးသောမွေ့လျော်ယူပြီးကြပြီ, အသက်ပျိုအဖြစ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများ၏အမျိုးမျိုးသောကခုန်စတိုင်များအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ ငါကအဖွဲ့များနှင့်လည်းဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီး, ဒီကခုန်များနှင့်အားကစားထဲသို့ကျဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ငါ့ကိုယ်ပိုင်စည်းချက်, ငါ့ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကျွန်မခန္ဓာကိုယ်နှင့်စွမ်းအင်၏အခြေခံအခွအေနေအဖြစ်ကမ္ဘာနှင့်လှုပ်ရှားမှုနားလည်လမ်းကို။ ဒါဟာငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ဘဝအဖြစ်ကသဘာဝဖြစ်ပါသည်, ခေတ်ပြိုင်ကခုန်ယဉ်ပုံစံနှင့်အမူအကျင့်များဆုံးရှုံးရနိုင်မယ့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာတဦးတည်းကိုအခြားအရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာတွေ့ - သင်လက်နက်နှင့် engineer.It နည်းနည်း Lara Croft နဲ့တူနေတဲ့အမျိုးသမီးစူပါဟီးရိုးများကဲ့သို့အသံတစ်ဘွဲ့ရနှင့်အတူရိုက်ကူးများအတွက်လိုင်စင်ရှိပြီးသူတစ်ဦးဘဲလေးကသမား, ပါပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူသတိထားပါရန်ရှိသည်ပါသလား
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပဲသင်တန်းနောက်နေ .. (nalaughter) ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါဖို့မအကြံပြုလိုတယ်။ အဆိုပါပစ်ခတ်မှုငါငါ့အဘို့ကိုအခြားပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတို့ကိုငါ့အာရုံကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပြီးကတည်းကကျွန်တော့်ဘဝမှာအရပျကိုဆုံးရှုံးသောကာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးလိုင်စင်ရှိသည်အဖြစ်တချို့ကအချိန်အကြာကသာငါမ, ငါ့နှမငါ့အဘတို့ကသူတို့ကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ဤလှုပ်ရှားမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားဘာဖြစ်လို့ဒီတစ်ခါလည်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပစ်မှတ်ရည်ရွယ်ဖို့ငါ၏အကြံအစည်လွှတ်ပေးရန်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်နဲ့ကျွန်မအတွင်းစိတ်တင်းမာမှုအချို့ကိုကြင်နာခဲ့လျှင်, ဒါပေမယ့်ယခုငါကိုယ်အဘို့ငါခန့်ထားပြီသောပန်းတိုင်များထိမှန်ရန်အလိုတော်နှင့်ဇွဲအဖြစ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စရိုက်လက္ခဏာလက်နက်ကိုအသုံးပြုဖို့သိရသည်။
အစဉ်မပြတ်ငါငါအစွမ်းသတ္တိ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ကြွက်သားခွဲခြာစဉ်းစားပါနဲ့ကျွန်မလူ့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝတရား၏ပြီးပြည့်စုံစက်ကြောင်းထင်ကောင်းစွာ-shaped ကြွက်သား, ကြိုက်တယ်ပါတယ်။ သဘာဝတရားတစ်ခုလုံးအဖြစ်စုံလင်သည်နှင့်ဥပမာ, ငါတို့အလောင်းကောင်များကဲ့သို့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲတင်းတင်းငါ့အဘို့ကခုန်ဖို့ခညျြနှောငျခဲ့မတိုင်မီအကြောင်း4လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါတစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူမှုအဖြစ်အားကစားသို့ရတယ်။ ကိုယ့်ငါလိုခငျြသောရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်နဲ့ကျွန်မသာကခုန်နှင့်အတူချင်သောရူပဗေဒရဖို့မနိုင်သဘောပေါက်လာတယ်။ သည်ငါအများကြီးအထပ်ထပ်နှင့်အလေးနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ပါပြီ, ဒါပေမယ့်သင်ကအလိုဆန္ဒနှင့်အတိုးများလာသောအခါ, လိုအပ်သောအားထုတ်မှုနဲ့ဇွဲနှင့်အတူအရာအားလုံးအောင်မြင်မှုနှင့်သင်တောင်မှကြောင့်မသက်မသာသို့မဟုတ်နာကျင်ကြောင်းမပြောနိုင်ပါဘူး - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများငါ့အဘို့ခက်ခဲခဲ့ဖူးဘူး, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းငါမှားဖြစ်ကြောင်းကို ပြီးနောက်အားလုံးသင်လိုချင်တာတွေလုပ်နေတာလို့ပဲ။ သင်ကသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်ရည်မှန်းချက်သည်နှင့်သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်လမ်းလျှောက်ဖို့အတှကျဒါဟာတောင်မှကျေနပ်မှုတွေအများကြီးယူဆောင်လာပါဘူး, မနှစ်မြို့ဖွယ်မဖွစျနိုငျ, အဘယ်သူမျှမသင်ဤလုပ်ဖို့စေသည်, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့သို့မဟုတ်ကြွက်သားထုထည်စုပြုံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။
ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုငါ့ကိုပေးခြင်းကြောင်းအဆိုပါခံစားမှု။ တောင်မှအခက်ခဲဆုံးအခိုက်အတွက်ငါ့ကိုယ်နှိုက်ကကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ကဲ့သို့၎င်း, မဟုတ်ရလဒ်ကိုယ်တိုင်ကလှုံ့ဆျောမှုဆုံးရှုံး don`t ။
ဒါဟာစိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငါ့ကိုပိုယုံကြည်မှုစည်းကမ်းနှင့်အခိုင်အမာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျွန်မကြိုးစားပမ်းစားလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအောင်မြင်ပြီရလဒ်ငါ့အဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပေါက်ရန်နောက်ထပ်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လက်ရှိငါကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အတှကျအထက်တန်းလွှာကလပ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်, ဒီဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှုထောင့်၌တည်ရှိ၏။
သငျသညျ yourselff အားဖြင့်သီးခြားစီလှုပ်ရှားမှု၏ဤအမျိုးအစားဖွံ့ဖြိုးဆဲပေါ်တွင်စီစဉ်နေကြသနည်း ကလပ်အပြင်ဘက်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ပရိသတ်ကိုမှလေ့ကျင့်ရေး, ကျန်းကျန်းမာမာအစာအာဟာရများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်း၌သင်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှဖို့?
ကျွန်မစိတ်ထဲတစ်ခုခုရှိသည်။ မကြာမီအံ့သြဖွယ်များမျှော်လင့်ထား။ ဤသည်ယခုတွင်ငါသည်အဘို့အလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ဝါသနာတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းပွောနိုငျသလဲ နှင့်သင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုဘယ်မှာအတွက် fit သလဲ?
အဲဒီမှာမှာမကောင်းမဖြစ်ကြောင်းကိုအရာဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားကြည့်ဝံ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသင်ကိုယ်သင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကယ့်ကိုသငျသညျ excites ကိုရှာဖွေအတိအကျဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမြဲသငျသညျအခြို့သောအရာကိုကြိုက်သို့မဟုတ်မပါလျှင်သင်ကမှာသို့မဟုတ်မကောင်းသည်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သင်သည်သင်၏စစ်မှန်တဲ့အခွက်တဆယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်, လူတိုင်းအတွက်အခွက်တဆယ်ရှိပြီးကိုယ့်အချိန်၌တွေ့ရှိရန်ရှိသည်။
ဇွဲ, အလိုတော်မာအလုပ်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတွေအများကြီး။ ဒါဟာစည်းကမ်းနှင့် Self-ယုံကြည်မှုအများကြီးကြာပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်အခြားသောသူတို့သည်သင်တို့ထံ၌ခိုလှုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်နိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်နှင့်တူရမည်။ အောင်မြင်မှုကအမြဲတမ်းသင့်ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်အတွက်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်။
အဘယ်အရာကိုပျက်ကွက်သည်နှင့်ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ် ... ပင်ဆယ်ကြိမ်ကျနော်တို့တစ်ချိန်ကပျက်ကွက်လျှင်သတ်မှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်အပေါ်အရှုံးမပေးသင့်သလဲ
ပျက်ကွက်သငျသညျရှိနေပြီနှငျ့သငျလာမယ့်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူအပြည့်အဝပါဝင်နေသည်။ သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ကိုတိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်ဤသူသည်သင်တို့လိုချင်သောအရာကိုမဖြစ်နှင့်ဤအသိအမြင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကြင်နာကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်မှသာလြှငျဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပျက်ကွက်တဲ့ Self-အသိပညာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံသူကပဲသင်ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ထဲမှာမနေတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်လုံလောက်စွာအခြေအနေကအဘို့ပြင်ဆင်ကြသည်မဟုတ်သောသင်ပြပါ။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်က Self-အသိအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။
မှားယွင်းနေလူများနှင့်မကောင်းတဲ့သဘောထားကိုငါ့ကို demotivate ။
သင်ဘယ်လို demotivation နှင့်အတူကိုင်တွယ်ကြောင့်သင်အခက်အခဲများကြားမှဆက်လက်လှုံ့ဆျောကြောင်းကားအဘယ်သို့ပါသနည်း
ငါနှငျ့ဆကျသှယျလူများတို့သည်ငါ့ကိုလာအောင်နှိုးဆွငါ့ကိုခိုင်ခံ့စေတော်, ငါ့နှမအလွန်ငါ့အလိုရှိသမျှလှုပ်ရှားမှုများ၌ငါ့ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ငါကခုန်သွားပါရာအရပ်စုစုပေါင်းအဲဒီမှာငါ့ကိုလှုံ့ဆျောပေးတတ်သောငါ၏အသက်တာ၌များစွာသောတောက်ပလူများ, ဖြစ်ကြပြီးငါ့ကိုအတုယူအားငါ့အအကြီးမားဆုံးလှုံ့ဆော်မှုလုံးကိုသိပ်ပြီးသူတို့နှင့်အတူကခုန်ယင်းစိတ်အားထက်သန်မှု, သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်, Derida Dance အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သောအဖွဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ် .. ။ ဒါကြောင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ demotivated ခံစားရဖို့ကျွန်မကိုဖွစျသှားသညျ့အခါထို့အပွငျ, ငါသည်ပိုပြီးမကြာခဏရည်ရွယ်ချက်၏, ငါသည်အစဉ်မပြတ်ပန်းတိုင်ရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုစဉ်းစားရန်ကြိုးစား, ငါသည်ကိုယ်မေးခွန်းမေးဖို့ "အဘယ်ကြောင့်ငါအမှန်တကယ်ဤသို့ပြုနေပါတယ်?" နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်တစ်ခုပေးသည့်အခါ ဒီနောက်တဖန်ငါ့လှုံ့ဆျောဖြေပါ။
ဒါဟာငါရှိသည်ဖို့လိုချင်တာတွေဖြစ်နှင့်ချင်သောအရာကိုအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါ, ငါ့ကိုအလွယ်တကူငါ့ဦးခေါင်းချ turn မဟုတ်စဉ်းစားမိတယ်။
ကျနော်တို့ Derida Dance စင်တာပြင်ဆင်နေသည်ဟုသစ်ပြပွဲကိစ္စတွင်။ ဒါဟာငါ့ကိုအများကြီးစိတ်အားငါ့ကိုစတေဲ့။ ငါငါ့အခန်းကဏ္ဍ၏ဇာတ်ကောင်ထွက်တွက်ဆရန်နှင့်ထဲသို့ရယူရန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဆိုပါမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သော "ဇင် Play ကို" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာခေတ်ပြိုင်ကခုန်စွမ်းဆောင်ရည် wich အာရုံစိုက်အတိတ်ဆီကဒီဇိုင်းနှင့်အတူဘဝအယူအဆနှင့်အညီလက်ရှိအဖြစ်မှန်ဆောက်လုပ်ဖို့ယောက်ျား၏ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ထင်ရသောဘုရားပကတိနှင့်အတူဒဏ္ဍာရီအားထုတ်မှုတစ်ခုအရေအတွက်တွေ့ကြုံတတ်၏။ အဆိုပါစိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုစူးရှသောအသက်တာကိုမလုံလောက်များအတွက်အသိတစ်ဦးထိန်သိမ်းဖြစ်လာကြောင်းကောင်းစွာ-coiffed အိပ်မက်များ၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးချနေကြသည်။ ဒါဟာသူ့ဖန်တီးမှုတွန်းအားအတွက်ဇာတ်ကောင်စေပါတယ်။ သူသည်တပ်မက်လိုချင်သောအအဖြစ်မှန်၏ "ကြွက်သားအမျှင်" ကိုဖန်တီးထားပါတယ်နဲ့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းကို promisingly တိုးတက်နေသည်သောအခါသူ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နားလည်မှုကျော်လွန်တစ်ခုခု intervenes နှင့်သူ၏အုပ်စိုးမှုကွာကြာပါတယ်။ သဘောအရပဲကစား "တစ်ခုခု" ဟုအဆိုပါဆင်ခြင်တုံတရားဒွိဝါဒ၏ရှုထောင့်သို့ fit ပါဘူး, ဒါကြောင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ကောင်းသောဆံပင်များကအထင်ကြီးခြင်းနှင့် fleetingly ပုံရသည်မဟုတ်ပါ, ထို။ သို့ရာတွင်အသက်တာ၏နှလုံးသည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်မိမိအထဲ၌၎င်း၏ Full-bloodedness ခံစားရရန်အကြောင်းပါ။
သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းရိုင်းကို run ပါစေလျှင်, သင်၏ရလဒ်တွေအိပ်မက်ဘာတွေလုပ်နေလဲနှင့်သင်မည်သို့ဥပမာ5သို့မဟုတ် 10 နှစ်များတွင်သင်၏အသက်တာကြံစည်ကြသနည်း
ငါ .. နေဆဲငါ့ကျောနောက်ကခုန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ကိုအနည်းဆုံးကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူကခုန်ဒီနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အားကစားရုံများကဲ့သို့အများအပြားပိုပြီးဖျော်ဖြေပွဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်နေပါတယ်။
သငျသညျဒိုင်ယာနာ Alexandrova အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
Facebook တွင်ဒိုင်ယာနာ Alexandrova
အတတ်ပညာ, အကအခုန်, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, စှဲလနျးခွငျး | | rating:5/ 30